ပရိသတ်တွေဟာ မိသားစုပြီးရင် ဒုတိယ မိသားစုလိုမျိုး ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇေရဲထက် – Suehninsi
အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ချိန်ကစပြီး ဇေရဲထက်ကတော့ တစိုက်မက်မက်ကြိုးစားလာလို့ အခုချိန်မှာဆိုရင် နေရာတစ်နေရာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇေရဲထက် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအများအပြားမှာ နေရာယူခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဇေရဲထက်က လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်
ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချောမောလှပတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ ပရိတ်သတ်အပေါ်မှာလဲ ဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်ပြီး မိသားစုအပေါ်မှာလဲ တာဝန်ကျေပွန်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အနုပညာလောကမှာလဲ ခိုင်မာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ ဇေရဲထက်ရဲ့ ဘဝလေး အေးချမ်းပြည့်စုံပြီး
စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ဇေရဲထက်တော့ အလှူအတန်းတွေတတ်နိုင်သလောက် ပြုလုပ်ကာ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ နေတတ်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပါ။ အခုလို အေးချမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ သူ့ဘဝလေးထဲမှာသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုအခုလိုပဲ ​ပြောပြရင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။”ကျနော်က
ကျနော့်ရဲ့ fanတွေကို ညီ ညီမ အကို အမ အမေ အဖေ အန်တီ. ဦးလေး အာ့လိုအမျိုးတွေလို ချစ်တာ ပျော်စရာကောင်းတယ်. Second family”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အနုပညာလောကထဲကိုဝငျရောကျလာခဲ့ခြိနျကစပွီး ဇရေဲထကျကတော့ တစိုကျမကျမကျကွိုးစားလာလို့ အခုခြိနျမှာဆိုရငျ နရောတဈနရောရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။ဇရေဲထကျ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှအေမြားအပွားမှာ နရောယူခဲ့ပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျနျော။ဇရေဲထကျက လကျရှိမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလုပျ
ဆောငျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ခြောမောလှပတဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျနဲ့ ပရိတျသတျအပျေါမှာလဲ ဂရုစိုကျတတျသူဖွဈပွီး မိသားစုအပျေါမှာလဲ တာဝနျကပြှေနျသူ တဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ အနုပညာလောကမှာလဲ ခိုငျမာတဲ့နရောတဈခုမှာ ရပျတညျနနေိုငျတဲ့ ဇရေဲထကျရဲ့ ဘဝလေး အေးခမျြးပွညျ့စုံပွီး
စိတျခမျြးသာစရာကောငျးပါတယျ။ဇရေဲထကျတော့ အလှူအတနျးတှတေတျနိုငျသလောကျ ပွုလုပျကာ အေးဆေးတညျငွိမျစှာ နတေတျတဲ့ မငျးသားတဈလကျပါ။ အခုလို အေးခမျြးပြျောစရာကောငျးတဲ့ သူ့ဘဝလေးထဲမှာသူ့ရဲ့ပရိသတျတှအေပျေါထားတဲ့စိတျကိုအခုလိုပဲ ပွောပွရငျဖှငျ့ခဲ့တာပါ။”ကနြျောက
ကနြေျာ့ရဲ့ fanတှကေို ညီ ညီမ အကို အမ အမေ အဖေ အနျတီ. ဦးလေး အာ့လိုအမြိုးတှလေို ခဈြတာ ပြျောစရာကောငျးတယျ. Second family”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပွောပွခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့သူက အသက်ရှင်နေသေးတယ်နော်လို့ အပြောခံခဲ့ရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မီးမီးခဲ
တချို့သောသူတွေက သမီးဖြစ်သူ စစ်လွန်းဝတီအတွက် ကျောင်းစရိတ်တောင် မထောက်ပံ့ပေးဘူးလို့ ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ စိုင်းလွှမ်း
အံ့မခန်းစွမ်းတဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ မဟာကာကြံဆစ်ပင်ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အသုံးပြုနည်း